Maxaa ka soo kordhey Cali guudlwaale iyo siyaasiyiinta hirshabeele. - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Maxaa ka soo kordhey Cali guudlwaale iyo siyaasiyiinta hirshabeele.
Maxaa ka soo kordhey Cali guudlwaale iyo siyaasiyiinta hirshabeele.
Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, siyaasiin reer Hiiraan ah oo uu qeyb ka yahay taliyihii hore ee NISA Cabdullaahi Sanbaloolshe, ayaa habeen hore Muqdisho kula kulmay Madaxweynaha HirShabellle Cali Guudlaawe.
Xildhibaanadaan iyo siyaasiinta oo dhamaantood u dhashay beesha Xawaadle ayaa Guudlaawe ka dalbaday in uu is hortaago in guddoomiyaha guddiga maamulaya doorashada baarlamaanka Soomaaliya ee ka imaanaya dhinaca HirShabelle aan laga dhigin Axmed Xasan Diini, kaasoo isla maanta la doortay.
Diini oo maanta loo doortay guddoomiyaha guddigaas ayay Xildhibaanadaan ku eedeeyeen in uu ugu hanjabay in dhamaan Xildhibaanada Xawaadle kaliya uu ka soo laaban doono Nuur Iidow Beyle, halka inta kalane uu ku dadaali doono inaysan soo bixin, isagoo sababta ugu sheegay in uu amarkaas ka soo baxay Villa Somalia.
Cali Guudlaawe ayaa mas’uuliyiintii uu la kulmay u sheegay in Diini ay wadato Villa Somaliya islamarkaana uusan waxba ka qaban karin.
Sidoo kale siyaasiintaan ayaa sheegay in Cali Guudlaawe oo isu dhiibay madaxtooyada Soomaaliya islamarkaana loo gaadho go’aanada siyaasadeed ee degaankiisa ama mida guud ee dalka. HirShabelle gaar ahaan magaalada Beladweyne ayaa kamid ah magaalooyinka ay ka dhici doonto doorashada ugu adag ee baarlamaanka Soomaaliya.
Maamulka HirShabelle ayaa aad loo saadaalinaya inay kasoo bixi doonaan xildhibaano aad u taabacsan Villa Somalia, sababtuna ay tahay in maamulkaas uu si buuxda gacanta ugu jiro madaxtooyada, ayada oo Guudlaawe uu si weyn gacanta ugu jiro villa soomaaliya.
Previous articleMaxay isku hayaan wasiirada khadiija iyo xamse+sababta.
Next articleMarkabka Royal Navy oo uu ku dhex faafay Covid-19!